Lahatsoratra nataon'i Michael Reynolds momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Michael Reynolds
Talata, May 14, 2013 Wednesday, May 15, 2013 Michael Reynolds
Amin'ny maha masoivoho nomerika amin'ny asa aman-draharaha nanomboka ny taona 1996, dia nanana fotoana ahafahana namorona tranokala orinasa sy orinasa tsy mitady tombony an-jatony izahay. Nianatra be dia be izahay teny an-dàlana ary nidina tamin'ny masinina voahosotra tsara ny fizotrantsika. Ny fizotrantsika dia manomboka amin'ny drafitra tranonkala iray, izay ahafahantsika manao asa fiomanana am-boalohany ary hametaka ny antsipiriany amin'ny mpanjifa alohan'ny hahatongavantsika lavitra loatra amin'ny làlan'ny fitanisana sy famolavolana. Na eo aza ny zava-misy
Ekeko… nanafana ny foko ny fanambarana vao haingana momba ny fisarahana teo amin'ny Twitter sy LinkedIn. Tsy ho afaka hanaparitaka ny fanavaozam-baovaon'izy ireo ao amin'ny LinkedIn intsony ny olona raha tsy mila miditra sy miditra. Na dia fantatro aza fa mizara ny hafaliako ny hafa, inona no mahatsara sy maharatsy ny fampifandraisana ny kaonty Twitter anao amin'ireo tambajotra hafa? Satria mbola mamela an'io fanao io ny Facebook dia mbola mitranga izany. Na dia mitondra ahy voanjo aza izany dia hanaiky aho
Fomba fanao amin'ny telefaona 5 manimba ny marikao
Alatsinainy 21 Febroary 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Michael Reynolds
Ny fampandehanana orinasa kely dia sarotra sy mampiady saina. Manao satroka marobe foana ianao, mamono afo, ary manandrana manamboatra dolara isaky ny azo atao. Mifantoka amin'ny tranokalanao, ny volanao, ny mpiasanao, ny mpanjifanao ary ny marikao ianao ary manantena fa afaka mandray fanapahan-kevitra tsara isaky ny mandeha. Mampalahelo fa miaraka amin'ny torolàlana rehetra misintona ireo tompona orinasa kely dia mety ho sarotra ny mametraka fotoana sy fifantohana ampy amin'ny marika. Na izany aza,
Araka ny efa fantatrao, ny fitorahana bilaogy dia hetsika marketing atiny lehibe ary mety hiteraka fanatsarana ny filan'ny motera fikarohana, fahatokisana matanjaka ary fisian'ny media sosialy tsara kokoa. Na izany aza, ny iray amin'ireo lafiny sarotra indrindra amin'ny fitorahana bilaogy dia ny fahazoana hevitra. Ny hevitra bilaogy dia azo avy amin'ny loharano maro, ao anatin'izany ny fifandraisan'ny mpanjifa, ny zava-mitranga ankehitriny, ary ny vaovaon'ny indostria. Na izany aza, fomba iray hafa tsara ahazoana hevitra bilaogy ny fampiasana tsotra izao ny valin'ny valim-pikarohana vaovao avy hatrany Google. Ny lalana mankany
Ampitomboy ny famokarana mailaka amin'ny maody ivelan'ny seranana
Talata, Janoary 25, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Michael Reynolds
Ny ankamaroan'ny olona mahalala ahy dia mahafantatra ny fitiavako amin'ny Inbox Zero. Nataon'i Merlin Mann nalaza voalohany, Inbox Zero dia fomba fitantanana ny mailakao sy hitazonana foana ny boaty fampidirana anao. Rafitra famokarana mailaka tsara io. Noraisiko ireo fotokevitra, nodioviko somary lavitra izy ireo, ary nanampy fiolahana vaovao vitsivitsy. Mampianatra fotoam-panabeazana amin'ny famokarana mailaka matetika koa aho. Na dia mpankafy be aza aho, tsy ny rehetra